Fampivoarana ifotony :: Haverina eny an-tsekoly avokoa ny ankizivavy niala an-daharana • AoRaha
Fampivoarana ifotony Haverina eny an-tsekoly avokoa ny ankizivavy niala an-daharana
« Manan-jo hisitraka fampianarana sy fanofanana arak asa ny vehivavy », io no lohahevitra nofidian’ny minisiteran’ ny Fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy araka asa ho amin’ny fankalazana ny andron’ny vehivavy. Ny alatsinainy lasa teo no andro nofidian’izy ireo hankalazana ity andro maneran-tany ho an’ny vehivavy ity, teny amin’ny Lisea Ampefiloha (LMA).
Nohamafisina fa manana zo hianatra sy handranto fahalalana ny vehivavy fa tsy ho fitaovana hanampy amin’ireo asa aman-draharaha andavanandro. Manana andraikitra ny vehivavy eo anivon’ny fanabeazana sy ny fampiroboroboana ny ankohonana malagasy ary ny fampandrosoan an’i Madagasikara.
Ilaina, noho izany, ny mampiakatra ny tahan’ny vehivavy miditra an-tsekoly, hahafahany misitraka ny zony. Ireo miala an-daharana ihany koa dia hanokanana fanentanana manokana hiverina eny an-tsekoly. Hisitraka ny fampianarana izy ireo ary indrindra ny fanofanana araka asa, mba tsy ho lasa vesatry ny fiarahamonina. « Tsy tokony ho tsinontsinoavina ny vehivavy satria izy ireo no andrin’ny fianakaviana iray ary mandray andraikitra goavana eo amin’ny fampandrosoana. Ny vehivavy no maro an’isa amin’ny ankizy vao miditra eny an-tsekoly. Arakaraka ny fisondrotan’ny kilasy nefa no maha vitsy ny vehivavy. Maro ireo miala an-daharana. Ny faharatsian’ ny lalana, ny fanaovan’ny ray aman-dreny fitaovana hanampy azy amin’ny raharaha andavanandro, ary indrindra ny fandefasana ireo ankizy vavy manambady aloha loatra noho ireo fombafomba nentin-drazana samihafa no sakana tsy hivoaran’ny vehivavy. Ilaina ovaina izany rehetra izany», hoy ny minisitry Fanabeazam-pirenena, ny Fampianarana teknika sy araka asa, Volahaingo Marie Thérèse.
Amboary ny lalana, ampiharo ny lalàna
Famatsiana herinaratra :: Miteraka ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo ny olana teknika